Egyptair စင်းကိုအန္တိမ pack ကို DOWNLOAD v1.2 FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 378 ကို MB
downloads ရယူရန္ 304 278
12 / 11 / 2013: v1.2 မှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: ပြင်ဆင်ခြင်း A320 & 321 ခြင်း, aircraft.cfg ဖိုင်တွေ install လုပ်မရကွ
အဘို့အ Egyptair စင်းကို Ultimate pack ကို FSX SP2 & P3D ပရိသတျ, ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ဖိုင်များကိုပြုပြင်မွမ်းမံလ၏ရလဒ်သည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်အတူလေယာဉ် Simulator အသိုင်းအဝိုင်းမြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။ : ဒီဗူးဝေးနေဖြင့်အားလုံးပြီးတော့ Fleet ၏အရှုပ်ထွေးဆုံးဖြစ်ပါတယ်ပြီးသားကဲ့သို့သော rikoooo.com စုဝေး
စော်ဘွားစင်းကို FSX & P3D
ပြင်သစ်လေကြောင်းစင်းကို FSX & P3D
အထူးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုပြီးသားကောင်းစွာယခင်ကဒ်မှလူသိများပြဿနာတွေပြင်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ တကျိပ်နှစ်ပါးသော Egyptair အရည်အသွေးအ repaints rikoooo နှင့်အဲယားဘတ်စ် A320 နှင့် A321 ၏ကို virtual cockpit တစ်ခု optional ကို FMC (ပျံသန်းမှု Computer Management) ၏လိုက်လျောညီထွေအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ကြသည်။
အားလုံးမော်ဒယ်များပါဝင်သည်: ဒါကြောင့်အပေါ်ထိုကဲ့သို့သော "ဘဏ်ကိုထောင့်" အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောနှိုးစက်နှင့်အတူ GPWS (System ကိုသတိပေးမြေပြင် Proximity), "လေညှပ်", "အရမ်းအနိမျ့မြေပြင်အနေအထား", "dont နစ်" နှင့်။ အိမ်ရှင်မ (panel ကို 2d) ၏စကားသံများ, ထိုကဲ့သို့သော Egyptair ၏စစ်မှန်သော Melody အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလှုပ်ရှားမှုများ၏ကပ္ပတိန်နှင့်အသံ၏အသံနှင့်အတူတစ်ဦးကရှုပ်ထွေးတဲ့ Back ကို Push စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကိရိယာတခု (2d panel ကို) + တစ်ဦးလေယာဉ် system ကိုကြေငြာချက်များ (Flightdeck) + ။
2011 ခုနှစ်, ရေယာဉ်စု Egyptair နှင့် Egyptair Express ကို (Cargo မပါ) တဆယ်မော်ဒယ်များအဓိကအားဖြင့်အဲယားဘတ်စ်နှင့်ဘိုးအင်း၏တစ်ချပ်, ဒီအထုပ်ကိုအများဆုံးမှန်ကန်ထိုကာလမှရောင်ပြန်ဟပ်။ 18 repaints ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းထိုကဲ့သို့သောဟောင်းအရောင်များနှင့် Egyptair သစ်အရောင်များအဖြစ်အဆိုပြုကြပါတယ်။ အားလုံးမော်ဒယ်များညဉ့်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ, ပြတင်းပေါက်များ, ရှေ့မီး, အချက်ပြမီးရောင်, လိုဂိုစသည်တို့ကိုတပ်ဆင်ထားခြင်း, အဖြစ်ကောင်းစွာကို virtual cockpit ဘို့ကြသည်။ ဒါကြောင့်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုလေယာဉ်အင်ဂျင်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သံကိုရှိပါတယ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်ပျံသန်းဝိသေသလက္ခဏာများအောက်ပါနှင့်။ ဥပမာ, ဘိုးအင်း 777-266ER သစ္စာရှိရှိပွား PW4090 အင်ဂျင် (Pratt & Whitney) နဲ့တပ်ဆင်ထားပါသည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု - အဘို့အနှုန်း-လိုအပ်ချက်မသင်မနေရ FSX
အဆိုပါ Egyptair စင်းကိုအန္တိမ pack ကို install မလုပ်ခင်သေချာ FSX SP2 (Service Pack 2) ပြီးသားတပ်ဆင်ထားသည်။
FSX-Acceleration ပြီးသား SP2 ရှိပါတယ်
အဆိုပါမပြေးခြင်းမရှိဘဲမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ် FSX Service Pack2။
SP1 Download လုပ်
SP2 Download လုပ်
သငျသညျကို install မထားဘူးဆိုရင် FSX SP2 အချို့ 3D မော်ဒယ်အဖြစ်ကိုအောက်တွင်မှန်ကန်စွာမပြပါလိမ့်မယ်:
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းအထုပ်အလွန်ရိုးရှင်းပြီး, ပဲ Next ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒီကြီးမားတဲ့ဖိုင်သတိပေး 378 mb, download, တာရှည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်များကိုရှောင်ရှားဖို့ခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုနှင့် breakpoints အားမှာပြန်လည်စတင်မယ့် download, accelerator software ကိုအသုံးပြုပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပြုသည် (ဟောင်း FlashGet).
installer ကို Windows မ, Mac နှင့်အတူသာသဟဇာတ
ရွေးချယ်မှုများတွင် VasFMC နှင့် FSUIPC ရှိနိုင်ပါသည် အတူတူ installed ။
မေလ 1932, အီဂျစ်လေယာဉ်တကယ်တော့ပေါ်ထွက်လာဖို့သတ္တမလေယာဉ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကုမ္ပဏီကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး။ သြဂုတ်လ 1933 မှစ. , EgyptAir ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကိုင်ရိုနှင့်လက်ဇန္ဒြီးယားအကြားစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ် Spartan ပေးထားပါတယ်။ နှစ်နှစ်အကြာတွင်ရေတပ်ကိုပိုမိုတဆယ်နှစ်လုံးကို EgyptAir လေယာဉ်ပျံက de Havilland ရှိပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းအီဂျစ်အစိုးရလေကြောင်းလိုင်း requisitioned နှင့်အမည်ပြောင်း "Misr လေကြောင်းလိုင်း။ "
1946 နှင့် 1949 မှာ "MisrAir" ၏ရေတပ်အပြင်ဆယ်ပါးအသစ်လေယာဉ်သဲသောင်ပြင်ကြိုတင်မှာတစ်နှစ်အကြာတွင်မိမိအဝန်ဆောင်မှုပြင်သစ်လေယာဉ်က "Languedoc" ဆယ် MisrAir Vickers ဆောက်သွားတတ်ကြသည်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
1956 ခုနှစ်တွင်အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်း MisrAir ကို "ညီညွတ်သောအာရပ်လေကြောင်းလိုင်း" သို့မဟုတ် "AAU" ဖြစ်လာ, ဆီးရီးယားလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူပေါင်းစည်း။ 1960 ခုနှစ်, UAA ဂျက် (ကြယ်တံခွန် 4-ဂ) သုံးစွဲဖို့ပထမဦးဆုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းလေကြောင်းလိုင်းအဖြစ်ထွက်ရပ်။ သူ့ရဲ့ရှည်လျား-ခရီးရှည်သွားလေယာဉ်ခရီးစဉ်များပစ်လွှတ်အကြောင်းမူကားနှင့်နိုင်ငံတကာလေကြောင်းအသွားအလာကိုထောကျပံ့ဖို့, လေကြောင်းလိုင်း 707 အတွက်အီဂျစ်ဘိုးအင်း 1968 ဝယ်ယူခဲ့သည်။
သီးခြား 1971 ခုနှစ်တွင်ဆီးရီးယား Airlines နှင့် MisrAir: အီဂျစ်လေကြောင်းလိုင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်းအမည်, EgyptAir ပြန်တယ်။
ဇူလိုင်လ 10, 2008 တွင်, EgyptAir အစတားမဟာမိတ်အဖွဲ့ (ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမဟာမိတ်) ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ EgyptAir အာဖရိက AFRAA အတွက်အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းအမည်ရှိ၏။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 1.143 မှ 31 ဖို့, ဇူလိုင်လ 2007 အဆုံးသတ်ရေးဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် 2006 ဘီလီယံအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ၏စံချိန်စုစုပေါင်းဝင်ငွေဖော်ပြခဲ့သည် 2007 နှင့်ကုမ္ပဏီအညီ, EgyptAir ထက်ပို 6.5 သန်းခရီးသည်သယ်ဆောင်။ (အရင်းအမြစ် ဝီကီပီးဒီးယား)
ယနေ့လေကြောင်းလိုင်း EgyptAir ပြည်တွင်းခရီးစဉ် (ဘူ Simbel, လက်ဇန္ဒြီးယား, Assiut, Aswan, Hurghada, Luxor, Sharm El-Sheikh) နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဃအာဖရိက 555 မှကိုင်ရိုနှင့်များစွာသောအခြားအီဂျစ်မြို့မြို့တို့မှ 69 အပတ်စဉ်လေယာဉ်ထက်ပိုမိုသယ်ဆောင်။ ဥပမာ Casablanca, ကျူးနစ်, အယ်လ်ဂျီယား, ထရီပိုလီ, ဘန်ဟာဇီ, Asmara, Khartoum, Addis Ababa, အင်တက်ဘီ, နိုင်ရိုဘီ, ဂို့, အက်ခရာမြားနှငျ့ Kano ပါဝင်သည်။
EgyptAir လည်းအများအပြားအာရှအမြို့မြို့ (ဘုံဘေ, ဘန်ကောက်, ကွာလာလမ်ပူ, စင်္ကာပူ, ကွမ်ကျိုး, ဘေဂျင်း, ဆိုးလ်, တိုကျိုမြို့နှင့်အိုဆာကာ) တာဝန်ထမ်းဆောင်ဥရောပ (အော်စလို, စတော့ဟုမ်း, ကိုပင်ဟေဂင်မော်စကို, ဘာလင်, လန်ဒန်, အမ်စတာဒမ်, ဘရပ်ဆဲလ်, Düsseldorf, Frankfurt, မြူးနစ် ဗီယင်နာ, ဇူးရစ်, ပဲရစ်, ဂျနီဗာ, မီလန်, ဘူဒါပက်, ကိယက်ဗ်, ရောမမြို့, ဘာစီလိုနာ, မက်ဒရစ်, လစ္စဘွန်း, အစ္စတန်ဘူလ်, အေသင်နှင့် Larnaca) နှင့်မြောက်အမေရိက (နယူးယောက် / တွေအတိုင်းနှင့်လည်းတိုရွန်တို / တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pearson 1 ဇွန်လ, 2011) မှ။
EgyptAir တစ်ခုချင်းစီ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ဤသို့တစ်ဦးအမှန်တကယ်စံပြခရီးသွားဆက်ကပ်ရန်၎င်း၏ခရီးသည်များအတွက်အရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုအရေအတွက်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့သည်။ (အရင်းအမြစ် ဝီကီပီးဒီးယား)
1 အဲယားဘတ်စ် A320-232 Egyptair
rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Egyptair အသစ်အဟောင်းအရောင်များ Repaints
145 စုစုပေါင်း: 16 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 129 စီးပွားရေးကိုအတနျး
2-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 4)
3-3 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 6)
၏ function ကိုအောက်တွင် Autobrake အားလုံးအဲယားဘတ်စ်အပေါ်ယခုတက်ကြွစွာက virtual လေယာဉ်မှူးအခန်းများအတွက် အောက်တွင်, vasFMC ၏ optional ကိုပေါင်းစည်းမှုနှင့်အတူ A320 နှင့် A321 ကို virtual လေယာဉ်မှူးအခန်း (မြင် FMC)
နယူး အင်္ဂါရပ်များ နှင့်အဲယားဘတ်စ် A3XX အပေါ်အထွာများအတွက်တိုးမြှင့်မှုများ
အဆိုပါ ECAMS ခတ်နှင့် slats များအတွက်5configurations ပြသထားတယ်။
(ထို slats နှင့်ခတ်အထက်) ကို ECAMS ၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာတစ်ဦးကညာဘက်မောက်စ်ကလစ်နှိပ်ကီလိုဂရမ်နှင့်ပေါင်ကြားကပြောင်းသည်။
အဆိုပါစံ configuration ကိုကီလိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင်လေယာဉ်များအတွက် configuration ကိုအကြောင်းအမျိုးမျိုးမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။
ထိုင်ခုံခါးပတ်; ဆေးလိပ်မသောက်ရ; Autobrake အဆင့်အတန်း (voir Autobrake);
Pitot အပူ; ဟိုက်ဒရောလစ်;
Deice eng1; eng2 deice Generator ကို;
Deice တောင်ပံ; ယူ-off သို့မဟုတ်ဆင်းသက် weigth ကျော်လွန်သွားပါကသတိပေး;
ဤသည်ကို default ECAMS မှသာတစ်ဦးထို့ပြင်နှင့်အပူချိန်ကို TAT နှင့် SAT, အချိန်ဇူလူနှင့်ဒေသခံအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုထည့်ပါသင့်တယ်
နှင့်ကို default ECAMS မှစုစုပေါင်းအလေးချိန်။
3 Autoflare (မမြင်နိုင်)
ဒီ feature တွေနဲ့ autopilot လေယာဉ်ဆင်းသက်နိုင်ဖြစ်သင့်သည်။ အ autopilot APR မှ switched လျှင်ဒေါင်လိုက်မြန်နှုန်းလျှော့ချဖြစ်ပါတယ်
အကယ်. ရေဒီယိုအမြင့် 150 ခြေရင်းထက်လျော့နည်းသည်။
20 ခြေမမှာ autothrust သုညဟုသတ်မှတ်သည်။ မဟုတ်ရင်တွန်းကန်အားကိုမှတိုးပွါးသင့်ရဲ့တွန်းကန်အားလီဗာလည်းသုညသတ်မှတ်ထားကြောင်းအရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်
20 ခြေထက်အထွဋ်မှာသင်အ, ECU အပေါ် TOGA Button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပတ်ပတ်လည်သွားစတင်နိုင်ပါသည်။ Autopilot တောင်တက်ရန်သတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်တွန်းကန်အားဖြစ်ပါတယ်
ဒါဟာသင်ဖိုင်နယ်လ်ပွဲစဉ်ချဉ်းကပ်မှုများအတွက်မှန်ကန်သောအမြန်နှုန်းနှင့်ခတ် configuration ကို select လုပ်ပါကအရေးကြီးပါတယ်။
Don't အ autobrake သတ်မှတ်ထားနှင့်သုညရန်သင့်တွန်းကန်အားလီဗာသတ်မှတ်ထားဖို့မေ့လျော့။ command ကိုအတွက်ရှေ့ပြေးအဖြစ်သငျသညျခဲ့ကြောင်းပတ်လည်သွားလာရင်းစတင်သင့်တယ်
အ autopilot failles လျှင်။
4 SFCC Slats နှင့်ခတ်ထိန်းချုပ်ရေးကွန်ပြူတာ (မမြင်နိုင်)
အဲယားဘတ်စ်အခတ်လက်ကိုင်၏4ရာထူးပေမယ် slats နှင့်ခတ်၏5configurations ရှိပါတယ်။
ECAMS မှတ်ချက်အပေါ်ပြသ POS Slats / ခတ်စာသားကိုင်တွယ်
(> 1 မိုင်တစ်မြန်နှုန်းမှာ SFCC အားဖြင့်အလိုအလျှောက်ရွေးချယ်ထားသည့်) 18 10 / 1 140 ချဉ်းကပ် configuration ကို
(ကမြန်နှုန်းမှာ SFCC အားဖြင့် automaticcaly ကိုရှေးခယျြ <1 မိုင်) 18 1 / F ကို 140 + F ကို Takeoff configuration ကို
takeoff configuration ကို 1 + F ကိုမှာ SFCC အမြန်နှုန်း 1 မိုင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်ပါလျှင် 210 မှအလိုအလြောကျခတ် retracts ။
ခတ်ထားမယ်ဆိုရင်အဆိုပါ SFCC လက်နက်ကိုင်အနေအထားမှအလိုအလြောကျလုယူသောသူသတ်မှတ်နှင့်မြန်နှုန်း 60 မိုင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သည်။ လုယူလိုအလျှောက်ကြသောအခါပြန်ရုပ်သိမ်းနေကြတယ်
မြန်နှုန်း 55 မိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဘရိတ်ခလုတ်ကိုပေါ်မှာ right mouse ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့် activated ဖြစ်ပါတယ်။
မြေပြင်တွင်သင်သည်သာအ MAX button ကိုရွေးနိုင်သည်နှင့်ဤကိစ္စ၌အ RTO (လက်မခံနိုင်ယူ-OFF) ဘရိတ် programmer ကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
လေထုထဲတွင်သင် LO / Med / MAX ရွေးနိုင်သည်
2 အဲယားဘတ်စ် A321-231 Egyptair
Repaint rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Egyptair ဟောင်းအရောင်များ
185 စုစုပေါင်း: 10 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 175 စီးပွားရေးကိုအတနျး
3 အဲယားဘတ်စ် A330-243 Egyptair
268 စုစုပေါင်း: 24 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 244 စီးပွားရေးကိုအတနျး
2-2-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 6)
2-4-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 8)
4 အဲယားဘတ်စ် A330-343E Egyptair
Repaintbyrikoooo နေသူများကဖန်တီး Egyptair အသစ်အရောင်များ
301 စုစုပေါင်း: 36 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 265 စီးပွားရေးကိုအတနျး
ဒီလေယာဉ်ပျံ (နှင့်အခြားမည်သည့်) ဖြစ်ပါသည် အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပေးအပ်: မီးခိုး ဘရိတ်, contrails, ဘီးနောက်ကွယ်မှရေမီး အင်ဂျင်, မီးခိုး ဘီးစသည်တို့ကိုမြေပြင်ကိုထိသောအခါ.
5 အဲယားဘတ်စ် A340-212 Egyptair
Repaintbyrikoooo နေသူများကဖန်တီး Egyptair ဟောင်းအရောင်များ
စုစုပေါင်း 260: 12 ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား + 24 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 224 စီးပွားရေးကိုအတနျး
အဆိုပါ A340 အထူးစောင့်ရှောက်၏ဘာသာရပ်ခဲ့, အခြို့ အ ECAM နှင့် Autobrake တူအထွာအထူး A340 အဘို့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့ကြ. အဆိုပါအသံတစ်ဦး၏လက်တွေ့ကျကျမျိုးပွားများမှာ Rolls-Royes Trent.
6 ဘိုးအင်း B737-566 Egyptair
Repaint rikoooo အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Egyptair အသစ်အရောင်များ
104 စုစုပေါင်း: 8 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 96 စီးပွားရေးကိုအတနျး
ဘိုးအင်း B3 ၏ 737D မော်ဒယ်-566 တစ်ဦးကို virtual cockpit ရှိသည်ပါဘူးဒါကြောင့်အစား ထိပျတနျး 2D Panel ကိုပျော်မွေ့။
7 ဘိုးအင်း B737-866 Egyptair
144 စုစုပေါင်း: 24 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 120 စီးပွားရေးကိုအတနျး
8 ဘိုးအင်း B777-266ER Egyptair
rikoooo ပေါင်း GSU ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး Egyptair အသစ်အရောင်များ Repaint
စုစုပေါင်း 319: 12 ပထမဦးဆုံးအတန်းအစား + 21 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 286 စီးပွားရေးကိုအတနျး
2-3-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 7)
3-4-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 9)
9 ဘိုးအင်း B777-300ER Egyptair
346 စုစုပေါင်း: 49 စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတန်းအစား + 297 စီးပွားရေးကိုအတနျး
3-3-3 (9 ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန်) - 2-3-2 (ရင်ပေါင်တန်းနိုင်ရန် 7)
10 Embraer ERJ 170LR Egyptair Express ကို
EgyptAir Express ကိုကိုင်ရိုမြို့အခြေစိုက်ဒေသဆိုင်ရာလေကြောင်းလိုင်းသည်အဲဂုတ္တုပြည်။ ဒါဟာ EgyptAir တစ်ဒေသဆိုင်ရာလက်အောက်ခံအဖြစ် 2006 ၌တည်နှင့် 1 ဇွန်လ 2007 အပေါ်သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်ခရီးစဉ်စတင်ခဲ့သည်. ဒါဟာ 12 Embraer E ကို 170 ရှိပါတယ်.
ဘိုးအင်း Embraer E ကို3၏ 170D မော်ဒယ်တစ်ဦးကို virtual cockpit ရှိသည်ပါဘူးဒါကြောင့်အစား ထိပျတနျး 2D Panel ကိုပျော်မွေ့။
VasFMC ပျံသန်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု Computer ကို
VasFMC အခမဲ့ဖြစ်ပါသည် အစီအစဉ် (ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်) FMS (ပျံသန်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်) တွင်တစ်ဦးပြီးပြည့်စုံ Semi-လိုလားသူပတ်ဝန်းကျင်တူအောင်ဖန်တီးရန်အဲလက်စ် Wemmer အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး. ဒီပရိုဂရမ် FSUIPC (ထည့်သွင်း) လိုအပ်ပါတယ်
Rikoooo အ VC ကိုထဲမှာဖော်ပြပါတယ်ခံရဖို့ vasFMC ၏အထွာအဆင်ပြေအောင်ဖြစ်ပါတယ်သို့သော်, မ ထိုသူအချို့တို့သည်ရိုးရိုးထိုသို့သော autopilot အပေါ်ခလုတ်အဖြစ်ဖယ်ရှားခဲ့ကြသည့် VC ကိုအတွက်အခြားအထွာနှင့်အတူပဋိပက္ခ။ သငျသညျ vasFMC နှင့်အတူပျံသန်းလာတဲ့အခါ, စိတျထဲထား အ VC ကိုရိုးရှင်းစွာအလှဆင်အဖြစ်အစေခံသော။
ရမယ် သာ 320D panel ကိုနှင့်သင်၏ A321 သို့မဟုတ် A2 ထိန်းချုပ်ဖို့။
အလွန်အရေးကြီးပါသည်, ဂရုတစိုက်အစီအစဉ်ကို manual ဖတ်.
vasFMC တစ်ဦးလေးလံအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အသင်ဤ option ကိုတပ်ဆင်ထားသည့်အဲယားဘတ်စ်ကိုရှေးခယျြ bootwhen မှအချို့သောအချိန်လိုအပ်သည်သတိထားပါ။
Rikoooo ၏ installer ကိုသငျသညျအလိုအလျှောက်သင့်ရဲ့ Simulator ကိုအတွက် vasFMC 2.1 install လုပ်ခွင့်ပြုနှင့်အဲယားဘတ်စ် A320 နှင့် A321 Egyptair အဘို့ကို pre-configured. အဆိုပါအထုပ်၏ Navdata လည်းပါဝင်သည် Navigraph - Navdata - AIRAC 0609 တစ်နှစ် 2006 (အခမဲ့)
အောက်တွင် (ညဘက်မှာ) အ 2D panel ကသည်:
MCDU နှင့်ပြီးပြည့်စုံ panel က
vasFMC သင့်ရဲ့ crash နိုင်ပါတယ် FSX or P3D သင်သည်ဤအမှု၌, အလုံအလောက်အခမဲ့ RAM ကို & CPU ကိုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, ဤ option ကို install လုပ်မပိုကောင်းပါတယ်။
အချို့သောဗီဒီယိုများလဲ tutorial ဘို့ link: vasFMC ကျူတိုရီရယ်ဗီဒီယိုများ